Waxaa la ogaaday in iPhone 11 ay ku jiri doonto xeedho USB-C ah sanduuqa | Wararka IPhone
Toni Cortés | | Qalabka IPhone, iPhone 11
Warbixin kale ayaa xaqiijinaysa in iPhone 11 waxaa ku jiri doona xarkaha USB-C sanduuqa. Waxaa jira seddex isbuuc oo keliya illaa IPhone 11 cusub uu soo ifbaxayo, macluumaad xasaasi ahna wuu dhacayaa maalinba maalinta ka dambeysa.
Maanta ayaa noo sheegaysa in ugu dambayntii iPhones cusub bixin doonaa xeedho 5W oo waxay soo qaadan doonaan Apple USB-C oo ay weheliso fiilada sanduuqa ku jirta.
Waxay umuuqataa in Apple ay qorshaysay muhiimada ay leedahay bisha Sebtember 10, (wali majiro xaqiijin rasmi ah), waxyarna waan usocona inaan ogaanno faahfaahin dheeri ah oo ku saabsan waxa Tim Cook iyo dadkiisa ay nagu tusi doonaan dhacdada la sheegay.
Maanta, Xeedho xeedho ayaa ku sheegtay qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka in iPhone 11 uu aakhirka ka tegayo xeedho 5W oo uu keenayo xeedho Apple USB-C ah iyo fiilo danab-to-USB-C ah. Tani waxay noo sheegaysaa taas markii ugu horreysay iPhone-ku wuxuu keeni doonaa xeedho dhakhso leh, inkasta oo isku xiraha mobilka uu wali yahay hillaac.
Charger Lab wuxuu kasbaday billad sanadkii la soo dhaafay markii ay dillaacday bixinno ka mid ah xeedho cusub ee Apple-USB-C ah ee Apple. Laakiin aad buu u caqli badnaa markii uu sheegay in xeedhokan loogu talagalay iPhone XS iyo XR cusub ee 2018, mana ahayn. Xeedho cusub ayaa ugu dambeyntii lagu daray iPad Pro laga soo bilaabo Oktoobar sanadkii hore.
Hadda waxay ku soo noqdeen culeyskii tilmaamayay xogtan si loogu daro xeedho taleefannada cusub. Kaliya maahan inay sheegaan. Bishii Maarso, Makotakara isna wuu soo sheegay isla.
Isbedelo aad u muhiim ah lagama filayo shaashadda dibedda ee iPhones-ka cusub. Kaliya muraayadaha cusub ee dhalada ah, iyo muranka guryaha laba jibbaaran oo ay ku yaalliin saddexda kamaradood iyo tooshku. Waxaa la filayaa in kaamirooyinkan cusub ay si weyn kor ugu kici doonto tayada sawir qaadista, marka lagu daro in lagu daro muraayadaha muraayadaha ballaadhan ee ballaadhan iyo shaqooyinka casriga ah sida Smart Frame.
Halka ay ka dhici doonaan isbeddello muhiim ah gudaha: processor-ka cusub ee A13, bateri weyn, matoor cusub oo Taptiko ah, lacag-bixin laba-geesood ah oo loogu talagalay hawo-mareennada, iwm..
Waxaan rajeyneynaa in dhammaan waxyaalahan daadanaya ee muuqda, aakhirka ay run yihiin. 10-ka Sebtember toddobada galabnimo, waxaan ka tagi doonnaa shaki ...
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Qalabka IPhone » Warbixin kale waxay xaqiijineysaa in iPhone 11 ay ku jiri doonto xeedho-USB-C sanduuqa
IOS 8 Beta 13, iPad OS, tvOS 13, iyo watchOS 6 oo loogu talagalay horumariyeyaasha